ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: မှတ်သားမိသော စကားများ
ဒီအကြောင်းအရာရဲ့ ခေါင်းစဉ်က ဒီစာမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင် Rules for Being Human တဲ့။ လူအဖြစ်ကို ရမည့် လူတစ်ယောက် သိသင့် သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ကို သြ၀ါဒပေးတဲ့ သဘောပါပဲ့။ အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့ သဘောမျိုး၊ လူ့ပြည်ကို သွားတော့မယ့် လူတစ်ယောက်ကို မှာနေတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။ မင်းလူ့ပြည်ကို သွားတော့မယ်။ မင်းလူ့ပြည်မှာ သိသင့်သိထိုက်တာလုပ်၊ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေကို အခုကြိုးစားပြီးတော့ မှာလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါပဲ့။ အဲဒီအချက်တွေကတော့ .....
၁။ You will receiveabody. You may like it or hate but it wills yours for the entire period this time around.
(သင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု ရမယ်။ အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကို သင်ကြိုက်ချင်လည်း ကြိုက်မယ်။ မုန်းချင်လည်း မုန်းမယ်။ ဒီဘ၀အတွက်တော့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပါပဲ့။ )
၂။ You will learn lessons. You are enrolled inafull time informal school called life.
(ရောက်သွားတဲ့ ဘ၀မှာ သင်ဟာ သင်ခန်းစာတွေကို အများကြီး ဆည်းပူးရလိမ့်မယ်။ ဘ၀လို့ခေါ်တဲ့ သင်ရိုး သတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့ အချိန်ပြည့်ကျောင်းကြီးမှာ သင့်ကို စာရင်းသွင်းထားပြီ။)
၃။ There are no mistakes, only lessons.
( အမှားမရှိပါဘူး။ သင်ခန်းစာတွေချည်းပါပဲ့။ )
၄။ In the long run we get what we deserve.
( ရေရှည်မှာ ကိုယ့်နဲ့ထိုက်တန်တာ ကိုယ်ရတယ်။ )
၅။ learning lessons does not end.
( ပညာသင်တာ အဆုံးမရှိဘူး )
၆။ '' There '' is no better than '' here ''
( ဟိုနေရာဟာ ဒီနေရာထက် ပိုမကောင်းဘူး။ အနာဂတ်ဟာ ပစ္စုပ္ပန်ထက် ပိုမကောင်းဘူး )
၇။ Others are merely mirrors of your.
( သူတစ်ပါးဟာ သင့်ရဲ့မှန်တွေပါပဲ့။ )
၈။ What you make of your life is up to you .
(သင့်ဘ၀ကို သင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ သင့်ပေါ်မှာပဲ့ မူတည်ပါတယ်။ )
၉။ Your answers lie inside you. The answer to your life's questions lie inside you.
(သင့်အတွက် သင့်အဖြေဟာ သင့်အတွင်းမှာပဲ့ ရှိပါတယ်။ သင့်ဘ၀နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေဟာ သင့်အတွင်းမှာပဲ့ ရှိပါတယ်။ )
၁၀။ You will forget this.
( အခုလိုမှာလိုက်တာကို သင်မေ့သွားလိမ့်မယ်။ )
ဆရာတော်ဦးဇောတိက၏ '' ဘ၀ဆိုတဲ့ကျောင်း '' စာအုပ်မှ.......
မြန်မာပြည် ပထ၀ီနိုင်ငံရေးနှင့် ခွဲထွက်ခွင့်
ကဗျာဆရာ မြင်းရိုင်း အောင်ဝေးရဲ့ ဇာတ်သိမ်း
အန်တီစုသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မဟုတ်
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မဲဝယ်မှုများ ရှိနေသည်...
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့တယ် ဆိုတိုင်း ဂရုစိုက်ရမှာလား
သမ္မတဘုရှိ၏ အကြံပေးအရာရှိ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒေါက်ကလပ် မက်အာသာ၏ ဆုတောင်း
မဟာအတုလ ဆရာတော်ဘုရား ဆုံးမစာ